TTSweet: iPad/ iPhone/iPod Touch သုံးသူ မိဘများ သတိပြုဖွယ် ***
Posted by T T Sweet at 1:04 PM
Thanks for your this reminder post
မေဓာဝီ October 24, 2011 at 2:42 PM
ဒီပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တီတီဆွိရေ။
ကျမလဲ ကလေးမဟုတ် သူငယ်မဟုတ် အလကားရတဲ့ ဂိမ်းတွေ ဆိုပြီး ဒေါင်းလုတ်ယူဆော့ဖြစ်တော့ လန့်တောင်သွားတယ်၊ သတိထားမှပဲ။
ကိုယ့် bank details ပေးထားရကတည်းက သိပ်တော့မဟုတ်ဘူး ထင်သားပဲ။ စီးပွါးရေးမှာလဲ အဲဒီလို မလိမ့်တပတ် လုပ်တာတွေက ethic မရှိတာပဲ။
နောက်ဆုံး ဈေးသည်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြထားတာလေးကို ဖတ်ရင်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတယ်။ နည်းပညာ တိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ တဘက်မှာ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေ ဖြစ်နေတာကို ကျမလဲ ခဏခဏ တွေးမိတယ်။ တိုးတက်ခြင်းရဲ့ ဆုတ်ယုတ်မှုများ ဆိုပြီးတောင် စာရေးမလား စဉ်းစားနေတာ။
Htoo Tay Zar October 24, 2011 at 3:19 PM
အမှန်တော့ အဲဒါက Apple ရဲ့ bug လို့လဲ ပြောလို့မရတဲ့ ပြသနာတစ်ခုပါ.. iOS update သာ ပုံမှန်လုပ်ရင် အဲဒီလို ပြသနာတွေ ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ။ Apple မှာ အဲဒီ Smurf game နဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့ ပြသနာပြီးကတည်းက iOS update ထုတ်ပြီး ပြင်လိုက်တာ ကြာပါပြီခင်ဗျ။ In App Purchase မှာ အရင်က password တစ်ခါထည့်ပြီးရင် နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ဝယ်ရင် ထည့်စရာမလိုတော့ပေမယ့် အခုကတော့ ဝယ်တိုင်းထပ်ထည့်ရပါတယ်။ နောက် ဖြစ်နိုင်ရင် ကလေးကို ပေးဆော့မယ်ဆိုရင် Parental Control setting ပြင်ထားတာက ပိုကောင်းပါတယ် ခင်ဗျာ..
Some greyware/spyware actually informed upfront in their EULA that 'we reserved right to transferred your personal information to third party...'etc. So it is already made clear possible complication,and the end users get shocked only when monetary sums are involved. Inaway they are not that cheating per se,it is legitimate within their definitions and applicable law thereof.
American justice system and laws have many aspects that are perfectly legitimate for application like this,because that's where the action is,capitalism,an economy system which the country is built upon.
Apple is great platform for consumers,but it says itself as primarily hardware company many times,and how can hardware company stands without all those value added services,in effect making more money than selling hardware. Afterall it is ripping off consumers and people are willing in return,until complication arises,that is.
Mo October 24, 2011 at 5:06 PM
a thrilling and informative post.
FaceBook မှာရှယ် သွားပြီဗျို .
ဦးခြိမ့် ရဲ. Chartered Fab7မှညီလေး တဦး
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 24, 2011 at 6:14 PM
iPad ဘာညာ မသုံးဖြစ်သေးပေမဲ့ သေသေချာချာ ဖတ်သွားပါတယ်။ တကယ်ကို ဗဟုသုတ ရပါတယ်..
ဂိမ်းတွေ သိပ်မသုံးဖြစ်ပေမဲ့ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေက မှတ်ထားရင် ကိုယ့်အတွက် အသုံးကျတာမို့ ဂရုတစိုက် ဖတ်ဖြစ်တာပါ။
ညီမကျတော့ ဖုန်းထဲမှာ ပိုက်ဆံကြိုထည့်ထားတာ အင်တာနက်ကနေ ဒေါင်းတာများပြီးဖုန်းထဲက ပိုက်ဆံတွေ အကုန်နီးပါး ဖြတ်ခံရတာမျိုး ဖြစ်ခဲ့ဖူးလို့ အင်တာနက်တောင် ဖုန်းနဲ့ မသုံးဖြစ်တော့ပါဘူး။ ရိုးရိုး လိုင်းကြိုးနဲ့ဘဲ အင်တာနက် သုံးဖြစ်တော့တယ်။ အလကားရတာတွေဘဲ လိုက်ရှာဒေါင်းတော့တယ် ဟီး
ခုအဖြစ်အပျက်လေး ပြန်လည်မျှဝေတာ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်
An Asian Tour Operator October 24, 2011 at 7:41 PM
ကျေးဇူးပါ။ အိုင်ပက်၊ အိုင်ဖုန်း မသုံးသော်ငြားလဲ သုံးနေတဲ့ သူတွေအတွက် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကျေးဇူးလာတင်တာပါ။ စေတနာက အထင်းသား။
rose of sharon October 24, 2011 at 8:55 PM
ကျမတော့ခလေးတွေကို password ပေးမသိဘူး... ကြောက်လို့... သူတို့ဟာသူတို့မဝယ်ရဘူးလို့လဲပြောထားတယ်... ခုထိတော့ ဘာမှမဖြစ်သေးပေမဲ့ in-app purchase ကို block လုပ်တော့မယ်...
အော်..ခေတ်ကြီးက..တကယ်လည်း တွင်းတွေ အပေါက်တွေ များပါလား..
တကယ်ဆို.. ပန်းသီးက.. အဲလို အကျင့်မကောင်း ထောင်ချောက် များ.. ကွန်ပလို့များတဲ့..ဂိမ်းတွေကို..ဘာလို့ ပေး တင် ရောင်း နေသလဲ.. they should have care customer trust. That's brand's thrusworthiness.
mgchaint October 24, 2011 at 9:07 PM
အမှန်တော့ အဲဒါက Apple ရဲ့ bug လို့လဲ ပြောလို့မရတဲ့ ပြသနာတစ်ခုပါ.. iOS update သာ ပုံမှန်လုပ်ရင် အဲဒီလို ပြသနာတွေ ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ။ Apple မှာ အဲဒီ Smurf game နဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့ ပြသနာပြီးကတည်းက iOS update ထုတ်ပြီး ပြင်လိုက်တာ ကြာပါပြီခင်ဗျ။
တကယ်တမ်း ပြောရရင် ပထမတုန်းက Jail break လုပ်ထားတာပါ။ အိုင်ပက်က နှေးနေတာနဲ့ itunes မှာ တတ်ပြီးကြည့်လိုက်တာ itunes version 10.4.0.80 နဲ့ version 4.3.5 (8L1) ကို အော်တိုမက်တစ် လုပ်မိသွားတယ်။ အဲဒီမှာ Jail Break လုပ်ထားတာလဲ ပျက်သွားတော့တာပဲ။ အဲဒီမှာ အခု အန်တီဆွိပြောတဲ့ ပြသာနာတွေ စတင်ပြီး ဖြစ်လာတာပါ။ အခုကျမှ Jail break တွေ လုပ်ထားပြီး တရားမ၀င် ဒေါင်းနေတာမှ ခပ်ကောင်းကောင်းဖြစ်နေတယ်....။
rose October 24, 2011 at 9:10 PM
တီဆွိရေ... ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံ ၉၀၀ ပြန်ရတော့ တော်သေးတာပေါ့နော်။ ရို့စ်ဆို အိုင်ဖုန်းနဲ့ ဂိမ်းကစားရင် apple id ကို ၀င်ကို မ၀င်ထားဘူး။ Free game တွေပဲ ဒေါင်းလုတ် ကစားတယ်။ Free game တောင် upgrade လုပ်ပါ၊ ဒီဂိမ်းကစားပါ ဆိုပြီး အိုင်ဒီ, Password တောင်းတတ်တယ်လေ။ အခုထိ ပိုက်ဆံလုံးဝ မပေးသေးဘူး။
iphone /ipad ဆိုတာ အပြင်မှာ တစ်ခါမှ မမြင်ဘူးသေးပါ ဒါပေမဲ့ အားပေးသွားပါတယ်
အိမ်မက်စေရာ October 25, 2011 at 1:04 AM
ဟုတ်တယ် အန်တီဆွိ ဒီမှာလဲ ဒီလိုပဲ .. ipnone မဟုတ်ရင် အင်တာနက်ဆိုင် တွေက နားမလည်သူတွေကို ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ အကောင့်က ငွေဖြတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်..အိမ်မက်တော့ iphone သုံးတယ် အင်တာနက်မသုံးဘူး.. ကောင်းတယ်နော်..
ှုငဝန်နဒီ October 25, 2011 at 1:48 AM
iturn ကဒ်ကိုပဲ ဝယ်ထားပြီး အကောင့် ဖွင့်ထားရင် အဲဒီထဲမှာရှိတဲ့ငွေ ကိုပဲဖြတ်တာပါ...ခရက်စ်ဒစ်ကဒ် ကို သုံးမိတုန်းက ခရက်ဒစ်ကဒ်အကောင့် အခိုးခံရပြီး လေယာဉ်လက်မှတ် ခိုးဝယ်တာကို ခရက်စ်ဒစ် ကဒ်စင်တာက ဖမ်းမိလို့ အကောင့် ခဏပိတ်ထားရဖူးတယ်...iturn ကဒ် ကိုပဲဝယ်ပြီး လိုသလို ပဲသုံးတာကတော့ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်တာလဲ ချက်ချင်းသိပြီး password ပါချက်ချင်းထပ်တောင်းတော့ စိတ်ချရတာပေါ့...
နည်းပညာကို Block လုပ်တာထက် ကလေးတွေ ရှောင်တတ်သည့် နည်းပညာ ရစေချင်လို့ ပါ... ဂိမ်းကစားတာကြောက်စရာ မဖြစ်စေချင်လို့ ပါ..
Dear U Chaint
please i need your help? may i know which singapore agent can prepare Australia CDR report?
i really need urgent for australis visa.
thanks so much for your kind heart
ကိုဇော် October 25, 2011 at 6:46 AM
ဗဟုသုတ အတော် ရတယ် အစ်မရေ။
ု့ခင်မောင် October 25, 2011 at 7:42 AM
Home >>>settings>> store>> sing out ဒါဆိုအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီ ကလေးအတွက် နော် လူကြီတွေအတွက်ဆို ရင် တော့ စာသေချာဖတ်ပေါ့
mgchaint October 25, 2011 at 10:44 AM
ကျွန်တော်အသိ လှမ်းမေးတဲ့ Agent ကတော့ OCSC GLOBAL PTE LTD
1 Scotts Road, #26-10 Shaw Centre, Singapore 228208. Orchard မှာ ရှိပါတယ်။ Agent Fees အနေနဲ့ SGD 2700 တောင်းပါတယ်။ Application fees & Assessment fees ကတော့ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ပေးပေါ့။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ Agent ကို ကြော်ငြာပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြုံကြိုက်လို့ လွယ်တာနဲ့ ပေးလိုက်တာပါ။ Agent နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ဘယ်လိုမှ မပါတ်သက်ပါ။ ကောင်းမကောင်းကတော့ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ဆုံးဖြတ်ပါ။
I have already posted in lastafew months ago and I copied and re-posted it.
၀ါဝါ October 25, 2011 at 11:46 AM
ဒီပို.စ်အတွက်ကျေးဇူးပါပဲ။ အိမ်မှာလဲ သမီးကဆော.တယ်။
Thanks for the post. really useful for parents.
ကြည်မြန်မာ October 25, 2011 at 12:58 PM
အင်းနော် ဟုတ်ပ..။ တီဆွိသာ စာရေးမမေးရင် ဦးခြိမ့်တော့ ၁၀၀၀ ကျော် ပေးလိုက်ရပြီ မှတ်ပဲ..။ ကုမ္ပဏီနဲ့ ဥပဒေနဲ့ဆိုပေမယ့် လုပ်တဲ့သူကတော့ လုပ်နေတာပဲ နော..။ ဆိုးပ..။
မဒမ်ကိုး October 25, 2011 at 4:33 PM
ဟားး တီဆွိရေ တော်သေးတယ် ဒိုးကန်က အိုင်ပေါ့ဝယ်ထားတာ အိုင်ကျွန်း စီးရီးချရင်ပိုက်ဆံပေးရမှာဆိုးလို့မချမိတာတော်သေးတာပေါ့
ဆုမြတ်မိုး October 25, 2011 at 4:47 PM
thx for sharing ttsweet :)
ဖိုးတုတ် October 25, 2011 at 5:21 PM
ခေတ်သိပ်မှီတဲ့ ဒီကာလကြီးမှာ ခရက်ဒစ်ကဒ်နဲ.ရှင်းရတဲ့ ဂိမ်းတွေက မိဘတွေကို " ဂိမ် "သွားစေမယ်ထင်တယ်၊
စင်ကာပူမှ ဘလောဂါတွေဆီက အသုံးအနှုန်းအသစ်တွေရတယ်၊
အဟမ်း ၊ ခင်ဂျာ ၊ ပိုက်ပိုက် .. (very cute)
-မဆွိကိုလည်း စလုံးက ဘလော့ဂါလို.ပဲ သဘောထားပါတယ်-
susu October 25, 2011 at 8:54 PM
မြသွေးနီ October 25, 2011 at 9:35 PM
ဒီပို့စ်တက်တက်ချင်းထဲက ဖတ်ပြီးပြီ။ ကွန်မန့်ပေးမယ်လုပ်မှ ကွန်နက်ရှင်ကြောင့် အခုတစ်ခေါက်ပြန်လာရတာ။ အစ်မဆွိ မျက်လုံြးူ့းမယ်ဆို ပြူးသွားလောက်တယ်နော်။ ဒီပို့စ်လေးက ဗဟုသုတအများကြီးရတယ်။ ကလေးမှာ လုံးဝအပြစ်မရှိပါဘူး..။ Apple က ခုလို တဘက်လှည့်နဲ့ ငွေယူတာသိရတော့ အံ့တောင်သြမိတယ်။ အစ်မဆွိလို လူမျိုးနဲ့မို့ ပြန်ရတာပေါ့။ မိဘတွေ ဘယ်လောက်များ ထိနေကြပြီလည်း မသိဘူးနော်။။ အိမ်က သားပြည့်လည်း ဂိမ်းမတရားဆော့တယ်။ တော်သေး.. ဒီမှာမို့လို့...။
Phomu October 26, 2011 at 12:04 AM
အတွေ့ အကြုံ ဝေမျှပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူတင်ပါတယ် အမရေ
ဗဟုသုတရသွားပါတယ် တီဆွိရေ။ သတိထားဦးမှ။
စိတ်ချရအောင် jail break လုပ်ထားပါတယ် iOS အသစ်ထွက်ရင်တောင် jail break လုပ်လို့ ရပြီလား မရသေးဘူးလား အရင်ကြည့်ပါတယ်။ ပြီးရင် Myanmar font ပါသုံးလို့ ရ မရပါကြည့်ပြီးမှ iOS အသစ်ကို ပြောင်းပါတယ်။ jail break ရှိတာ အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။ Pa Pa Go Gps $70တန်လောက်ကို တပြားမှမကုန်လိုက်ရထဲက jail break မှ jail break ဖြစ်သွားတာ။
Thu October 27, 2011 at 2:44 PM
စားသုံးသူ အိတ်ထဲ ပါလာတဲ့ ငွေကို လုမယူရုံတမယ် နှိုက်ထုတ် အိတ်တော့ရှင်း (Extortion) စံနစ်နဲ့ ရောင်းချတာပဲ။
Tin October 28, 2011 at 5:52 PM
တီတီဆွိတို့ အော်စတြေးလျား ဗီဇာမတင်ခင် အင်္ဂလိပ်စာ IELTS ဖြေတာ ဘယ်လောက်တွေ ရခဲ့ပါသလဲ။ Over all နဲ့ တစ်ခုချင်းဆီ (အထူးသဖြင့် Writing)မှာပေါ့။ General ဖြေတာလား Academic ဖြေတာလား?
San San Htun October 29, 2011 at 4:15 AM
ဗဟုသုတ တိုးတဲ့အတွက် သိုင်းကျူး တီဆွိ..
mgchaint October 29, 2011 at 11:48 AM
Immigration အတွက် IELTS ဖြေမယ်ဆိုရင် General ဖြေလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖြေဆိုတဲ့ အချိန်က IELTS Scores6ရရင် ၁၅ မှတ်ရပါတယ်။ ၇မှတ်ရရင် အမှတ် ၂၀ ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် Scores for ever subjects ကို7မှတ် ရမှ Immigrant အတွက် အမှတ် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်ရသလဲ ဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ မိမိကိုယ်ကို ဘယ်လောက်ရအောင် ကြိုးစားရမလဲ ဆိုတာသာ အရေးကြီးဆုံးပါ။
အဲဒါမျိုးတွေမသုံးတော့ စိတ်တော့မပူရဖူးး)
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် October 31, 2011 at 4:45 AM
ကျေးကျေးပါ။ အမျိုးမျိုးသော cheating တွေထဲက တစ်မျိုးပေါ့လေ။ အခုလို အားလုံးသိအောင်ပြောပေးလိုက်တာ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်း အများကြီး အကျိုးရှိပါတယ်ရှင်။
Apple ကပိုက်ဆံပြန်ပေးတာလည်းသံသယတော့ဝင်စရာမရှိပါဘူး။user တွေကိုတန်ဖိုးထားတာပါ။ တစ်ခါစားမကြံတာပါ။ apps တွေကများတော့သေချာcheck မလုပ်နိုင်လို့ သူ့တာဝန်သူယူတာပါ။ game company ကသာပိုက်ဆံညာယူတာပါ။
Dear TT Sweet,
pls check it out the following link. https://www.facebook.com/note.php?note_id=326329544068615
Sharing your post without any credit. FYI pls.
T T Sweet January 20, 2012 at 9:56 AM
ဟုတ်ကဲ့ အနောနိမတ်စ် ... သွားကြည့်ပြီးပါပြီ။ ရှယ်ထားကြတာတွေတော့ အများကြီးပဲ။ ခရက်ဒစ်မပေးလဲ ရပါတယ်။ သတင်းပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး။
I am actuallу hарpy to reaԁ this wеb
site posts which cоnsists of tons of useful facts,
Ηere is my webpage - repair imac kuala lumpur
Ηi evегybody, heге eνеry person
іs sharing these eхperience, so it's nice to read this weblog, and I used to go to see this weblog all the time.
Feel free to visit my website :: ipad repair malaysia
Thanks for the mаrvelous postіng! Ӏ serіouslу enjoуеd rеaԁing it, you сοuld be a
great authoг. I will ensuгe that I booκmark уour blοg anԁ
maу сome back ѕοmedaу. I ωant to enсouragе сοntinue your
gгeat pοѕts, haνeanicе day!
Feel fгee to vіsit my pagе :: ipad repair malaysia